Goolhaye Alisson Becker iyo Xaaskiisa oo shaaciyey inuu u dhashay cunugoodii saddexaad, xilli Chamberlain uu ku dhawaaqay… – Gool FM
(Liverpool) 11 Maajo 2021. Alisson Becker iyo Xaaskiisa Natalia ayaa dunida ku soo dhoweeyey cunugoodii saddexaad oo ah wiil sida uu shaaciyey Goolhayaha Kooxda kubadda cagta Liverpool.
Ciyaaryahanka reer Brazil oo 28-sano jir ah ayaa loo magacaabay xiddiga garoonka ee (man-of-the-match) kaddib markii uu shabaqiisa gool ka ilaashaday kulankii Sabtidii ee Southampton, iyadoo Reds ay soo nooleysay rajadooda afarta sare ee horyaalka, markii ay 2-0 ku adkaadeen kulankii ka dhacay garoonka Anfield.
Labadaan lammaane oo is-guursaday sanadkii 2015-kii ayaa soo dhoweeyey cunuggoodii saddexaad, maadaama ay hore u haysteen Gabadha la yiraahdo Helena oo dhalatay sanadkii 2017-kii iyo Wiilka lagu magacaabo Matteo oo dunida ku soo biiray sanadkii 2019-kii.
Alisson ayaa warkaan ku shaaciyey bartiisa Instagram-ka oo ay ku xiran yihiin todobo milyan oo raacayaan ah (followers), waxaana uu soo dhigay Sawir ay ku wada jiraan isaga, xaaskiisa iyo wiilkiisa cusub.
Waxa uu Goolhaye Alisson sawirkaas ku soo dul qoray: “Soo dhowaaw Wiilkeyga!”
Warkan ayaa imaanaya isla maalin uun markii uu Alisson saaxiibkiisa ay isku kooxda yihiin ee Alex Oxlade-Chamberlain uu ku dhawaaqay inuu rajeynayo cunuggiisii ugu horreeyay oo ay caloosha ugu siddo saaxiibtiis muddada dheer iyo xiddigta heesaaga ah ee Perrie Edwards.